Gịnị bụ DFU mode?
DFU anọchi Ngwaọrụ femụwe Update. Ọ bụ a kwuo na ị pụrụ itinye gị iPhone n'ime ebe ọ pụrụ interface na iTunes ma adịghị Ibu Ibu iPhone sistemụ ma ọ bụ buut Loader. Ị nwere ike ịgbanwe na-ahọrọ femụwe ị chọrọ iji wụnye jidesie gị iPhone n'okpuru DFU mode. Ka ihe atụ, ị ga-eji DFU mode ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji wụnye a gara aga version nke iOS, jailbreak gị iPhone ma ọ bụ Ị kpọghee ekwt gị SIM. Ọ bụrụ na (n'ihi na ihe ọ bụla kpatara) ọkọlọtọ mgbake na-adịghị arụ ọrụ ka i nweta ngwaọrụ gị azụ arụ ọrụ ọnọdụ, DFU nwere ike inyere gị si.
Olee otú na-esi gị iPhone Tinye DFU Mode
Ebe ọ bụ na DFU nwere ike inye aka idozi ahụ tara mbipụta, olee otú anyị na-etinye ihe iPhone (gụnyere iOS 9 iPhone) n'ime DFU mode? Ọ bụghị a mgbagwoju anya oru ọrụ. N'ezie, onye obula na iPhone nwere ike ime ya naanị site na-eso nke ọ bụla n'okpuru.
1. Tinye DFU na ọnọdụ na iTunes:
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na kọmputa na-agba ọsọ iTunes. Nzọụkwụ 2. Chee iPhone anya site na ịpị Ike bọtịnụ na n'elu gị iPhone. Nzọụkwụ 3. Press ike na Home buttons n'otu oge maka kpọmkwem 10 sekọnd. Nzọụkwụ 4. Mgbe ahụ, hapụ Ike button na na-na na ịpị Home button ọzọ 10 sekọnd. Kwụpụ 5. Mgbe ị na-ahụ a mmapụta ozi site na iTunes ka ndị a, ị nwere ike ka gị na mkpịsị aka na ịpị na Home button-aga.
2. Tinye DFU na ọnọdụ na Wondershare Dr.Fone maka iOS:
Ọ bụrụ na ị na-adịghị iTunes arụnyere na kọmputa gị na-achọghị ka nwere ya, i nwere ike iji Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery.
Jikọọ gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka na-agba ọsọ ahụ omume na kọmputa gị. Ahụ na-aga ka elu mode na ị ga-ahụ na windo n'okpuru.
Ugbu a na-agbaso nzọụkwụ ke window na-amalite na-abanye DFU mode na nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Jide ngwaọrụ gị, wee pịa green Malite bọtịnụ. Nzọụkwụ 2. Mgbe ịpị Malite button, pịa Ike na Home n'otu oge ozugbo maka kpọmkwem 10 sekọnd. Nzọụkwụ 3. Mgbe 10 sekọnd gafere, hapụ ike bọtịnụ ugbu a, ma na-na ịpị Home ọzọ 10 sekọnd. Nzọụkwụ 4. Mgbe ị na-asian na ị na-aga nke ọma banyere DFU mode, ị nwere ike hapụ Home bọtịnụ.
Cheta na: Mgbe gị na iPhone bụ DFU mode, ihuenyo ga-kpamkpam nwa. Ọ bụrụ na, na ị bụghị na DFU mode. Site n'ụzọ, Wondershare Dr.Fone maka iOS nwere ike na-enyere gị iPhone 4 / 3GS, iPad 1 na iPod aka 4 ịbanye DFU mode.
Olee otú ụzọ ọpụpụ DFU na ọnọdụ na Your iOS Ngwaọrụ
WepuÚ DFU Mode Iji aka
Ọ bụrụ na gị iPhone araparawo DFU mode, nke kacha ụzọ iji nweta ya si na-na ịpị Ike button na Home button n'otu oge maka banyere 10 sekọnd, ruo mgbe ị na-ahụ Apple logo-egosi. Otú a na-arụ ọrụ niile iPhone 6s (Plus), iPhone 6s (Plus), iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4 na iPhone 3GS, nakwa dị ka iPad na iPod aka ma ọ bụrụ na ị chọrọ nwere a na-agbalị .
Olee otú ụzọ ọpụpụ DFU na ọnọdụ na Dr.Fone maka iOS na 1 click
Wondershare Dr.Fone Maka iOS (iPhone Data Recovery) pụrụ inyere gị aka wepuÚ DFU mode na otu Pịa.
Jikọọ gị iPhonn, iPad ma ọ bụ iPod aka na kọmputa na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone maka iOS (maka iOS 9). Mgbe ahụ kpọmkwem iṅomi gị iPhone ị ga-enweta na window dị ka ndị a.
Pịa na Malitegharịa ekwentị na ngwaọrụ nkịtị bọtịnụ na ala-n'akụkụ aka ekpe nke window. Mgbe ahụ, ị nwere ike nweta gị iOS ngwaọrụ nke DFU mode ugbu a!
Mgbe ị na-eche ngwaọrụ gị bụ oyi kpọnwụrụ, echegbula ukwuu na dị nnọọ echere a oge. Mgbe ụfọdụ, ọ chọrọ a mgbe Malitegharịa ekwentị. Ọ bụrụ na ọ ka na-adịghị na-egosipụta ihe ọ bụla, na-agbalị pịa Ike na Home button n'otu oge nke a mgbe, ruo mgbe ị pụrụ ịhụ na-acha ọcha Apple logo na ihuenyo. Mgbe ahụ ngwaọrụ gị ga Malitegharịa ekwentị nkịtị na sekọnd ole na ole.
Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla ọzọ ajụjụ banyere otú ịbanye na ụzọ ọpụpụ DFU mode, ma ọ bụ i nwere ezi aro, welcome na-eso ha na anyị ebe a.
The Crisis nke Bendgate maka iPhone 6
> Resource> iPhone> DFU Mode: Olee otú Tinye na wepuÚ DFU ọnọdụ nke Your iOS Ngwaọrụ